पछिल्ला समय मुलुकका मुख्य शहरहरुमा साना हतियारको प्रयोग बढ्दै « News24 : Premium News Channel
पछिल्ला समय मुलुकका मुख्य शहरहरुमा साना हतियारको प्रयोग बढ्दै
पछिल्ला केही घटनाहरुले राजधानी काठमाडौंलाई असुरक्षित बनाउँदै लगेको छ । राजधानी लगायतका विभिन्नस्थानमा साना हतियारको प्रयोग बढ्दै गएपछि आपराधिक घटनाहरु समेत बढेका छन् । निर्माण व्यवसायी शरद्कुमार गौचनको हत्या होस् वा म्हैपीमा केही दिन अघि चलेको गोली, साना हतियारले पछिल्लो समय राजधानीको सुरक्षा चुनौति बढाइदिएको छ ।
कानूनतः व्यक्तिगत रुपमा साना हतियार राख्न नेपाल सरकारले कसैलाई पनि इजाजत दिएको छैन । यदि कसैले त्यसरी हतियार राखेको भएमा त्यो अवैध हुने कानूनमा उल्लेख छ । हतियार राख्न पाउने अधिकार कानूनीरुपमा बन्देज भएपनि पछिल्लो समय साना हतियारको विगविगी उस्तै छ । कसरी ल्याईन्छ ? कसरी प्रयोग गरिन्छ ? न प्रहरीलाई थाहा छ न सरकारलाई नै । तर, यहि साना हतियारको प्रयोगले कयौं घटनाहरु भएका छन् । काठमाडौंको वानेश्वरमा निर्माण व्यवसायी हत्या प्रकरण र म्हैपीमा चलाइएको गोली प्रकरणमा साना हतियार प्रयोग भएको पाइएको छ । बढ्दो साना हतियारको प्रयोग प्रहरी सुरक्षा संयन्त्रको टाउको दुखाई बन्न थालेको छ । यसको प्रयोग रोक्न र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रहरीलाई समेत हम्मेहम्मे परेको छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै यि र यस्तै हतियारको लेखाजोखा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सक्रिय बनेको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणलाई हेर्ने हो भने हालसम्म १३ हजार ३ सय ४५ हतियारलाई व्यक्तिगत रुपमा राख्न इजाजत प्रदान गरिएको छ । यद्धपि दुरुपयोग हुने डरले इजाजत करार नगरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई छ । इजाजद दिइएकामा साना हतियार भने पर्दैनन् ।
साना हतियार अवैध रुपमा भित्रिँदै गर्दा सरकार र प्रहरी सुरक्षा संयन्त्रले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । इजाजत प्राप्त प्रतिवेदनका बारेमा अध्ययन गर्नु भन्दा पनि सुरक्षा संयन्त्रले अपराधका क्रममा प्रयोग हुने साना हतियारको नेपालमा भित्राउने मुख्य सञ्जालको खोजी गर्न आवश्यक छ ।